१ अर्ब १२ करोड लागतमा अपर चौरीखोला हाइड्रोपावर बन्दै, राष्ट्रिय वाणिज्य र कृषि बैंकको संयुक्त लगानी - Arthatantra.com
१ अर्ब १२ करोड लागतमा अपर चौरीखोला हाइड्रोपावर बन्दै, राष्ट्रिय वाणिज्य र कृषि बैंकको संयुक्त लगानी
काठमाडौं । अपर चौरीखोला हाइड्रोपावर आयोजनामा दुई सरकारी बैंकले वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् ।
कर्णाली जलस्रोत लिमिटेड माउ कम्पनी रहेको हिमालय वाटर रिसर्च एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. र बैंकबीच एक कार्यक्रमबीच सो सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको बीचमा रहेको चौरीखोला निर्माण हुन लागेको ६ मेगावाट आयोजनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले संयुक्त लगानी गर्न लागेका हुन् ।
आयोजना १ अर्ब १२ करोड कुल लागतमा बन्न लागेको छ । जसमा आयोजना कम्पनीले ३५ प्रतिशत र ६५ प्रतिशत लगानी दुई बैंकले गर्ने भएका छन् । ६५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६० प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने भएका छन् ।
वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठ र कृषि विकास बैंकका सिईओ अनिलकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । कम्पनीको तर्फबाट जुद्धबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
हस्ताक्षरपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिईओ श्रेष्ठले उक्त कम्पनीमा लगानीले बैंकलाई जलविद्युत क्षेत्रमा थप नयाँ अनुभव प्राप्त हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजना सम्बन्धी कम्पनीले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सुझाव दिनुभयो । सिईओ श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीकर्ताबीच विवाद हुने र आयोजना अलपत्र पर्ने देखिएको भन्दै निर्धारित समय सीमा र लागतमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनभयो ।
“जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरुबीच सुरुमा राम्रै सम्बन्ध भएपनि आयोजना बन्न लागेपछि गाडी कसले चढ्ने, सेयर लगायतका विषयलाई लिएर विवाद गर्ने र आयोजना अलपत्र परेका धेरै उदाहरण छन् । यो आयोजनामा त्यसो नहोस् समय र लागत सीमामै रहेर आयोजना सम्पन्न गर्नुहोला, थप सहकार्यको लागि तयार छौं” सिईओ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले आफूहरुले जे भन्यो त्यही गर्ने भएकोले सम्झौताअनुसार लगानी गर्न कुनै समस्या नआउने समेत बताउनुभयो ।
सोेही अवसरमा कृषि विकास बैंकका सिईओ अनिलकुमार उपाध्यायले आफूहरुले प्रतिवद्धता पूरा गर्ने भन्दै आर्थिक अनुशासन बस्न आयोजना कम्पनीलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
व्यवसायीक कोणबाट आयोजना एकदमै राम्रो र सम्भवनायुक्त भएकोले आफूहरु लगानी गर्न तयार भएको बताउनुभयो । सबै अध्ययन र प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गरेकाले आफूहरुबाट कुनै समस्या नहुने भन्दै आयोजना कम्पनीलाईसफलताको शुभकामना समेत दिनुभयो । उपाध्ययले सरकारी बैंकले लगानी गरेको तर काम भएन भन्ने नहोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा हिमालयन वाटर रिसर्च एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको माउ कम्पनी कर्णाली जलस्रोत लिमिटेडका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतले सम्झौताअनुसारकै लगानी र समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
दुवै सरकारी बैंकले लागनी गर्नुलाई सफलता भएको भन्दै रावतले २०७९ को दशैंमा वत्ति बाल्ने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी समेत गराउनुभयो ।
अध्यक्ष रावतले वर्षायाममा पनि नरोक्ने भन्दै अहिले पनि आयोजना निर्माणको काम जारी रहेको जानकारी समेत दिनुभयो । “दुबै सरकारी बैंकले लागनी गर्नु हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो ।
सम्झौताअनुसार लगानी र समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नेछौं । वर्षाको समयमा पनि काम रोकिने छैन, आउने दशैंमा बत्ति बाल्ने गरी परियोजनालाई अगाडि बढाएका छौंँ” अध्यक्ष रावतले भन्नुभयो ।
कर्णाली जलस्रोत लिमिटेडको ८० प्रतिशत सेयर रहेको र तीन सय सेयर सदस्य रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष रावतले सबैको विश्वासमा घात हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत जाहर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा हिमालयन वाटर रिसर्च तथा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरुले सहभागी सबैलाई स्वागत गर्दै काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना नभएसम्म निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
वि.सं.२०७८ साउन १५ शुक्रवार १२:३६ मा प्रकाशित
अपर चौरीखोला हाइड्रोपावर
अघिल्लाे १६९ प्रतिशतले बढ्यो स्वरोजगार लघुवित्तको नाफा, अन्य सूचक कस्ता ?
पछिल्लाे मेगा बैंकद्वारा एकैदिन ६ वटा नयाँ शाखा विस्तार